राष्ट्र बैंकले रु. २० अर्बको ट्रेजरी बिल्स सोझै खरिद गर्दै, आज बोलकबोल Bizshala -
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार रु. २० अर्बको नेपाल सरकारका ट्रेजरी बिल्स सोझै खरिद गर्नका लागि बोलकबोल गरेको छ।
बोलकबोल बिहीबार दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन माध्यमबाट गरिनेछ। ट्रेजरी बिल्सको खरिद मिति भने मंसिर २४ गते तय गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपाल सरकारका ट्रेजरी बिल्सको भुक्तानी मिति २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको छ। काउन्टरपार्टीले बिक्री गर्न चाहेको तोकिएको भुक्तानी मिति भएका नेपाल सरकारका ट्रेजरी बिल्सको सिरिज नम्बर र परिणाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ।